Zanu-PF Yoita Chadzimira Mushure Mekukundwa neMDC
Kubvumbi 03, 2008
Zanu PF yava kuita chadzimira pamwe nekushaya pekubata zvichitevera kukundwa kwayakaitwa neMDC musarudzo dzenhenbgo dzedare reparamende. Politiburo yebato iri yava kutarisirwa kusangana neChishanu kuti izeye nyaya yakakakosha yekuti chii chaizvo chakaitika kuti bato iri rikundwe musarudzo dzakaitwa neMugovera.
Munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato iri, VaDidymus Mutasa, vanoti bato ravo richasangana neChishanu, apo richazeya nyaya yesarudzo. Mashoko atiri kutambira anoti hapana kuwirirana panyaya yekuti VaMugabe voramba vachikwikwidza here kana kuti kwete sarudzo, sezvo vamwe vari kuti ngavachienda pamudyandigere.
Shamwari yaVaMugabe uye vaimbova mutungamiri wehurumende yeMalaysia, VaMahatma Mohamad, vanoti hurumende yeMalaysia inofanira kubvumidza VaMugabe kuti vaende pamudyandigere kunyika iyi kana vakakundwa sarudzo.
VaSydeny Masamvu vanoongorora nezvematongerwo enyika musangano reInternational Crisis Group.
VaMasamvu vaudza mutori wenhau Blessing Zulu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZanu-PF.